आर्सनल एफए कपको चौथो चरणमा ! लिड्स युनाइटेडलाई १–० गोलले हरायो - MeroKhelkud.com
January 7, 2020 January 7, 2020 MeroKhelkud170LeaveaComment on आर्सनल एफए कपको चौथो चरणमा ! लिड्स युनाइटेडलाई १–० गोलले हरायो
काठमाडौँ । इङ्लिस प्रिमियर लिग क्लब आर्सनल एफए कप फुटबलको चौंथो चरणमा प्रवेश गरेको छ । सोमबार राति भएको खेलमा आर्सनलले लिड्स युनाइटेडलाई १–० गोलले हरायो । घरेलु मैदानमा आर्सनललाई जिताउन रेइस नेल्सनले निर्णायक गोल गरे ।
प्रतिस्पर्धात्मक खेलको पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकिएको थियो । नेल्सनले ५५औं मिनेटमा गरेको गोलनै आर्सनलको जितमा निर्णायक बन्यो । लिड्सले पनि गोल गर्ने राम्रा अवसर गुमाएको थियो । चौथो चरणमा आर्सनलले बर्नमाउथसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
नापोलीमाथि इन्टरमिलानको जितमा लुकाकुको दुई गोल
इटालियन सिरी ए मा इन्टरमिलानले नापोलीमाथि जित हासिल गरेको छ । गएराती सम्पन्न खेलमा इन्टर मिलानले नापोलीमाथि ३-१ गोल अन्तरले जित हासिल गरेको छ । इन्टरको जितमा रोमेलु लुकाकुले दुई गोल गरेका थिए भने लाउटारो मार्टीनेजले एक गोल गरेका थिए ।
त्यस्तै नापोलीका लागि एक गोल अर्काडिउस्ज मिलिकले गरेका थिए । यो जितसँगै इन्टरको १८ खेलमा ४५ अंकसहित शिर्ष स्थानमा उक्लिएको छ । युभेन्टस ४५ अंकसहितनै गोल अन्तरको आधारमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ । त्यस्तै नापोली १८ खेलमा २४ अंकसहित लिगको आठौ स्थानमा रहेको छ ।
रोयल राइनोजले उचाल्याे बीएमडब्लु कप टी-२० क्रिकेटको उपाधि
महानगर कप भलिबल : चौतारा र ललितपुर क्वाटरफाइनलमा
भोलीदेखि ‘ए’ डिभिजन लिगका पाँचौ चरणका खेलहरु